सेक्सका क्रममा गरिने यी पाँच प्रकारका चुम्बन - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
सेक्सका क्रममा गरिने यी पाँच प्रकारका चुम्बन
मेरो लाइफस्टाइल	|| 19 December, 2021
चुम्बन वा किस पार्टनरलाई माया र विश्वासको भावनाहरू व्यक्त गर्ने भाषा हो । जोडीले आफ्नो पार्टनरलाई चुम्बन मार्फत आफ्नो इच्छा सजिलै बुझाउन सक्छ । सेक्स गर्दा चरम आनन्द लिन यी किस गर्नुहोस् ।
सिङ्गल लिप किस
सेक्सको सुरुवातमा पार्टनरलाई अंगालोमा लिएर ओठमा मायालु किस गर्नुहोस् । किस गर्दा तपाईँले पार्टनरको ओठलाई नटोकी गर्न सक्नु हुन्छ । पार्टनरलाई माया गर्छु भन्नको लागि यो किस उत्तम हुन्छ । यसले पार्टनरको मुड राम्रो हुन्छ ।
टङ्ग किसलाई फ्रेन्च किस पनि भनिन्छ । यो संसारको लोकप्रिय किस हो । यो किस भावनात्मक र हट किसका रूपमा पनि लिइन्छ । यस किसले सेक्सका समयमा पार्टनरलाई उत्तेजित पार्न मद्दत गर्दछ ।
सेक्सका बेला टङ्ग किसपछि जोडीले मन पराउने नेक किस हो । यस किस मार्फत पार्टनरलाई आफू विशेष व्यक्ति भएको महसुस गराउन सक्नु हुन्छ । यो किस गर्दा धेरै आक्रामक नहुनुहोस्, अन्यथा पार्टनरको लभ बाइट हुन सक्छ ।
सेक्सका क्रममा जोडीले किस मात्र नगरी टोक्ने पनि गर्छन् । यसरी गर्दा पार्टनरलाई बढी उत्तेजना हुन्छ ।
रोमान्सको समयमा सम्पूर्ण शरीर कामुक हुन्छ । यस्तो अवस्थामा बाँडी किसले मुड सेट गर्न र रोमाञ्चक अनुभव गराउँछ ।
चुम्बनबारे रोचक तथ्य - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] चुम्बन वा किस पार्टनरलाई माया र विश्वासको भावनाहरू व्यक्त गर्ने भाषा हो । जोडीले आफ्नो पार्टनरलाई चुम्बन मार्फत आफ्नो इच्छा सजिलै बुझाउन सक्छ । तर किस गर्ने तरिकाले मुड बिगार्न र भावनामा चोट पुग्न सक्छ । यसरी चुम्बन गर्नुहोस् । […]
यी टंग किसले पार्टनर हुन्छन् मोहित - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] पुरानो र लोकप्रिय तरिका हो । टंग किस सेक्सका क्रममा पार्टनरलाई उत्तेजनामा […]
पार्टनरलाई चुम्बन गर्ने तरिका मन नपरे यसो गर्नुस् - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
[…] सीधै ओठमा चुम्बन गर्दा घृणा लाग्न सक्छ । अन्य ठाउँमा […]
सेक्सका लागि यी खानेकुरा हानीकरक « Mero LifeStyle
के हो अनलाइन सेक्स ?
वास्तवमा अनलाइनमा अर्काे व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राख्न सकिँदैन । तर, इन्टरनेटमा यौनसम्बन्धी तस्वीरहरू हेर्नुका साथै यौनिक क्रियाकलाप गर्नु अनलाइनमा सेक्स
युवा पुस्तामा निकै प्रिय मानिन्छ, तान्त्रिक सेक्स । शान्त, मधुरो प्रकाश र फराकिलो ठाउँमा यस प्रकारको सेक्स हुन्छ । ‘तान्त्रिक’
कण्डमको प्रयोगले सन्तुष्टिमा असर पर्छ ?
१६औं शताब्दीमा युरोपको लिनेनमा पहिलोपटक बनेपछि यौन सम्पर्कका बेला कण्डमको प्रयोग हुन थाल्यो । बिस्तारै दुई शताब्दी बित्दै जाँदा कण्डमहरू
मानिस सुतेपछि अनेकथरी सपना देख्ने गर्छन् । प्रायः दैनिक जीवनमा भइरहेका त कहिले काल्पनिक दृश्यसमेत सपनामा देखिन्छ । सपनामा देखिएका